टिमिंग टूर गाईडहरू रोममा - TipWho
घर / युरोप, इटाली, क्षेत्र, रोम, टूर गाईडहरू, पर्यटन / रोममा टिपिंग टूर गाईडहरू
रोममा टिपिंग टूर गाईडहरू
1 रोममा टिपिंग टूर गाईडहरू
1.1 रोमको परिचय
1.2 के तपाईंलाई रोममा टूर गाइड सल्लाह दिन आवश्यक छ?
1.3 रोममा मैले मेरो यात्रा मार्गनिर्देशन कति सुझाव दिनुपर्दछ?
अनन्त शहरको रूपमा चिनिने रोम संसारकै सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटन स्थलहरू मध्ये एक हो। गत वर्ष, त्यहाँ रोममा २ million मिलियन भन्दा बढी रात पर्यन्तहरू द्वारा बनेका थिए। लोकप्रिय रोम आकर्षणहरूमा भ्याटिकन, भ्याटिकन संग्रहालय, कोलोसियम, रोमन फोरम, क्रिप्ट्स, वा बजारहरू रोममा हुँदा गर्नु पर्ने सबै लोकप्रिय चीजहरू समावेश गर्दछ। यदि तपाइँ टुर गाईडको मद्दतले रोममा साइटहरू देख्नुहुन्छ भने, तपाइँले तपाइँको टुर गाइडमा अन्त्यमा टिप छोड्नु पर्छ कि हुँदैन भनेर जान्न चाहानुहुन्छ।
के तपाईंलाई रोममा टूर गाइड सल्लाह दिन आवश्यक छ?
टिपिंग आवश्यक छैन तर यो निश्चित रूपमा सराहना गरिएको छ। इटालियनहरूका लागि, टिप टुर गाइडहरूको परम्परागत हुनेछैन, तर त्यहाँ मार्गनिर्देशकहरू छन् जसले विदेशीहरूबाट सल्लाहको आशा गर्छन्। राम्रो सेवाको लागि सुझाव दिन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्, तर मात्र त्यसो गर्नुहोस् यदि टुर गाईड कम्पनीको लागि काम गर्दछ, यदि तिनीहरू स्वरोजगार भएका छैनन् भने। यदि तपाईं टिप छोड्न चाहानुहुन्छ भने, थम्बको नियम मार्गनिर्देशनमा प्रति व्यक्ति केहि युरो दिन्छ।
यो दिमागमा राख्नुहोस् कि इटालेली ग्राहकहरूले टुर गाइडहरूको सुझाव दिदैनन् किनकि स्थानीय टिपिंग शिष्टाचारलाई टुर गाइडहरूको लागि इटालीमा टिप चाहिदैन। प्रख्यात भनाइ जस्तो छ "जब रोममा हुन्छ, रोमीहरूले गरेजस्तै गर्नुहोस्" त्यसैले तपाईंलाई टिप नछोड्दा खराब महसुस गर्नु पर्दैन।
रोममा मैले मेरो यात्रा मार्गनिर्देशन कति सुझाव दिनुपर्दछ?
यद्यपि टिपिंग कल्चरलाई यसको आवश्यक पर्दैन यदि तपाईं आफ्नो गाइडलाई टिप दिन चाहानुहुन्छ भने, औंठिको नियम भनेको प्रत्येक व्यक्तिको लागि युरोको एक जोडी दिनु हो।
युरोपइटालीरोमटिपिङटिपिंग शिष्टाचारसुझावभ्रमण गाईडहरू युरोपइटालीक्षेत्ररोमटूर गाईडहरूपर्यटन
नाई टिप क्यालकुलेटर 1897
के तपाइँ टिप एएए गर्नुहुन्छ? 1616
न्यूयोर्क ट्याक्सी सल्लाह 1570
संयुक्त राज्य अमेरिकामा टिपिंग ट्याक्सीहरू 1562
आवास स्याउ पे एशिया नाई नाई बारहरू bartender क्यानाडा द्वारपाल सम्पर्कविहीन क्रेडिट कार्ड परिभ्रमण डिज्नी क्रूज लाइन चालकहरुको युरोप गुगल भुक्तानी किराना पिकअप र वितरण निर्देशित भ्रमणहरू हेयर ड्रायर हेयर ड्रायर होटल घरेलू नौकराहरू मालिश चिकित्सकहरू पैसा उत्तर अमेरिका भुक्तानी भरियाहरू क्षेत्र रेस्टुरेन्ट सफारी सर्भर सेवा स्पा ट्याक्सीहरू टिप क्यालकुलेटरहरू टूर गाईडहरू टूर गाईडहरू पर्यटन यातायात सानातिना Uber संयुक्त राज्य अमेरिका भिसा कार्ड वेटर / वेटरिस